Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
UMeng Yu Edolobheni LasePingdingshan, Esifundazweni SaseHenan
Ngesinye isikhathi lapho ngenza umsebenzi wami, ngaphawula ukuthi umfowethu othile wayezama ukujabulisa odadewabo, okwakubonakalisa isici esibi sesimo sakhe emehlweni ami. Nganquma ukufuna ithuba lokumkhumbuza ngalezi zinto. Kwadlula izinsuku futhi ngaqaphela ukuthi ukwenza kwakhe umsebenzi kwakuba nokuthela okuncane—okuwubufakazi bendlela engangimahlulele ngayo ngaphambili. Ngakho nganquma ukukhuluma naye ubuso nobuso. Nokho, lapho sithinta lolu daba, waphika ngokuqinile konke ukuphawula kwami futhi wathi ngiyamahlulela. Wathi, “Kuyo yonke le minyaka, ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma nami, ukhuluma nami ngokungehlisa, futhi nanamuhla ukhuluma ngendlela efanayo yokungehlisa….” Ingxoxo yaphenduka yaba yimbi kakhulu kunokuba ingabi nazithelo—yabhidlika ngokungavumelani okukhulu. Indlela aphendula ngayo yangenza ngafinyelela esiphethweni esingesihle, ngacabanga: “Ngikhulume ukuze ngisize, hhayi ukuba ngikuphoxe ngokudalula amaphutha akho. Esikhundleni sokulalela, ubheka amaphutha kimi futhi ungisola ngokukwehlisa. Kulungile! Ngizokuyeka kanjalo. Noma kunjalo, izinhloso zami bezizinhle, futhi ukwenqaba kwakho kumane kubonisa ukuthi awulifuni iqiniso.” Kusukela lapho, njalo ngangizibona ngiwumuntu olungile, ngesikhathi ngicabanga ukuthi umfowethu kuphela owayesephutheni. Nokho, ngisanda kuthola ulwazi ngami ngenxa yokusebenzelana nabantu, izinto nezimo uNkulunkulu azibeke eceleni kwami.
Ezinsukwini ezedlule, ibandla lanikeza omunye wabafowethu abancane umsebenzi omusha. Wayevame ukuba nempilo engeyinhle, kodwa kusukela lapho, waguquka waba umuntu omusha, waba nengqondo ekhaliphile futhi wakhuluma ngokuzethemba okwengeziwe. Ngolunye usuku, wakhuluma nami ngephimbo, isimo sobuso nangendlela eyangishiya ngicasuke ngokujulile. Ngangazi ukuthi wedlulisela intando kaNkulunkulu futhi ukhuluma iqiniso ngami, kodwa ngamane ngangakwazi ukumlalela, ingasaphathwa eyokwamukela lokho ayekusho. Lapho nje sengizophahluka, ngazibona mina masinyane kuye futhi ngakhumbula izwi nesimo sobuso engasisebenzisa ezinyangeni ezimbalwa ezedlule lapho ngikhuluma nomfowethu. Akumangalisi ukuthi ngathathwa njengowehlisayo. Wayeqotho kulokho ayekuzwa, futhi manje ngizwe nginokunengwa okufanayo nalokho akuzwa kimi—njengomuzwa wokucanuzela kwenhliziyo wokudla impukane efile. UNkulunkulu wahlela isimo esinjalo ukuze angenze ngibone leli qiniso: Umuntu onezinhloso ezinhle kodwa onesimo esingaguqukile akanayo indawo kaNkulunkulu enhliziyweni yakhe, ngakho, akubonakalisayo kuyimvelo, futhi kuwukubonakaliswa kwesimo sakhe sobusathane. Ngaleso sikhathi, ngakhumbula okuthile okusenkulumweni kaKristu: “Ukuzazi kuyilokhu: Lapho uzwa ngokwengeziwe ukuthi wenze kahle endaweni ethile, ucabanga ngokwengeziwe ukuthi wenze into efanele endaweni ethile, ucabanga ngokwengeziwe ukuthi unganelisa izinhloso zikaNkulunkulu endaweni ethile, futhi lapho ucabanga ngokwengeziwe ukuthi ufanelwe ukuqhosha endaweni ethile—kukufanele ngokwengeziwe ukuba uzazi kulezi zindawo futhi kukufanele ngokwengeziwe ukumba ujule kuzo ukuze ubone ukuthi yikuphi ukungcola okukhona nokuthi yiziphi izinto ezingakwazi ukwanelisa izinhloso zikaNkulunkulu” (“Ukuzazi Kudinga Ukwazi Imicabango Nemibono Yakho Egxilile” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Ngalokhu, uNkulunkulu ufundisa abantu ukuba baqonde ukungabi nokuhlanzeka emazwini nasezenzweni zabo. Ngenxa yokuthi abantu ngokwemvelo banokuvukela futhi bagcwele oshevu bobusathane, izenzo zabo, uma zingalungisiwe ngeqiniso, ngokwemvelo zimelana noNkulunkulu. Labo abacabanga ukuthi ukuziphatha kwabo kuvumelana neqiniso futhi abanakusolwa, empeleni abaguquliwe esimweni, futhi abakapheleliswa nguNkulunkulu. Baselokhu bemelana noNkulunkulu ngengqikithi yabo yangaphakathi futhi baveza isimo sobusathane. Kunokungcola okuningi kubantu okudinga ukuba kucubungulwe, kubonwe futhi kubhekwane nakho. Manje njengoba ngibheka emuva engxoxweni engaba nayo nalowo mfowethu, ngangibeke izaba ngokulunga kwami ngezinhloso zami ezinhle, kodwa ngehluleka ukuqaphela ukuthi ngangibe nendlela eyiphutha engxoxweni yami. Ngazibeka njengenkosi yeqiniso, umuntu onganquma ukuthi abanye baziphatha ngendlela ejwayelekile yini, futhi ohlukanisa ngokuphelele; ngangicindezela ongilalelayo ukuba amukele futhi ngokophawu oluncane lokungavumelani ngimbheke “njengongafuni iqiniso.” Yini engiyembulile? Ukuzithwala, ukukhahla, ukucindezela, ukuqinisa—izimo zikaSathane ezenyanyekayo nezicasulayo. Ingabe ukhona umehluko phakathi kwalokho engakwembula kanye nokucindezelwa kwezombusazwe okusezinhlanganweni zezombusazwe eziningi eziqhutshwa udrako omkhulu obomvu? Udrako omkhulu obomvu akathembele ndawo ngaphandle kwasezinhlosweni zakhe lapho enza izinsolo futhi ecindezela ngonya isintu. Empeleni angizange ngithandaze kuNkulunkulu noma ngifune ukuqondisa Kwakhe ngaphambi kokuxoxa nomfowethu, noma ngiqinisekise ukuthi wayesephutheni ngempela yini ngaphambi kokuba nombono wami wangaphambili, ngacabanga ukuthi ukungakhiqizi emsebenzini wakhe kwakungenxa yethonya elibi, futhi ngacindezela ukuba amukele ukusola. Manje ngiyabona ukuthi imvelo yami iyafana naleyo kadrako omkhulu obomvu—konke engangikwenza, ukubukeka kwami nendlela engangikhuluma ngayo konke kwakunephunga lezimo zokuzithwala okuwukubonakaliswa okwejwayelekile kukadrako omkhulu obomvu. Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe usizo kubantu ngesimo sami esonakele? Kungenzeka kanjani ukuthi uMoya oNgcwele ungasebenza ngami? Ngaphandle kokusebenza Kwakhe, ngingakulindela kanjani ukuveza izithelo ngokukhuluma kwami? Manje ngiyabona ukuthi ukukhuluma akubanga nazithelo, hhayi ngoba umfowethu enqaba iqiniso, kodwa ngenxa yokuthi angizange ngibeke uNkulunkulu enhlizinyweni yami futhi ngangingeyena umuntu ofanele phambi kukaNkulunkulu. Lokho engakwembula kwakungenyanywa kuphela nguNkulunkulu, kodwa futhi nangabantu.
Ngenxa yomsebenzi wangempela kaNkulunkulu, ngiyazazi futhi ngiyaqonda ukuthi uma abantu bengaguqukile esimweni, ngeke bangakwazi ukungavezi isimo esikhohlakele sikaSathane ngisho noma becabanga ukuthi banezinhloso ezinhle nokuziphatha okufanele, ngakho-ke kufanele bazazi bona. Kusukela manje kuye phambili, ngizofuna ukunaka ukuguquka kwezimo zokuphila kwami, ukuba ngizazi mina futhi ngiguqule imvelo yami, ukuba ngingenzi ukwahlulela ngokubuka okukha phezulu, ukuba ngigweme umkhuba wokuyeka ukubheka iphutha kimi lapho nginezinhloso ezinhle, ukuba ngifune ukuzazi mina kuyo yonke into, ukuba ngithole uguquko esimweni futhi ngilethe induduzo enhliziyweni kaNkulunkulu.
Okwedlule：Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula
Okulandelayo：Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele
UYixin Edolobheni LaseShijiazhuang Esifundazweni SaseHebei Ngaphambili, ngangivame ukuzwa abafowethu nodadewethu bethi, “Konke uNkulunkulu akwenzayo o…
UChangkai eDolobheni laseBenxi, esiFundazweni saseLiaoning Amazwi ajwayelekile athi “Bonke babeka imithwalo ehhashini elivumayo” amazwi engiwajwayele …
Imigomo yokusebenzisa Ubumfihlo contact.[email protected]